Cali Xarbi: “Xildhibaanka aan dilay ee Sir David Amess waxa uu dhibaato ku ahaa Muslimiinta” | dayniiile.com
Home WARKII Cali Xarbi: “Xildhibaanka aan dilay ee Sir David Amess waxa uu dhibaato...
Cali Xarbi: “Xildhibaanka aan dilay ee Sir David Amess waxa uu dhibaato ku ahaa Muslimiinta”
Nin asal ahaan Soomaali ah oo loo haysto dilka xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka UK, Sir David Amess, ayaa ka hadlay waxa ku dhaliyay falkaas.
Cali Xarbi Cali oo 26 jir ah ayaa sheegay inuu u dilay xildhibaanka sababo la xiriira inuu u codeeyay duqeynta Suuriya.
Sir David Amess oo laga soo doortay deegaanka Southend West ayaa toori lagu dilay 15-kii October 2021.
“Haddii ay ii muuqatay in falkaas uu khalad yahay, ma ba samayn lahayn,” ayuu yiri Cali oo beeniyay in falkaas uu ahaa argagixisannimo.
“Isaga iyo xildhibaanno kale ayaa u codeeyay xeer baarlamaan oo lagu dhibaateeyay Suuriya. Haddii aan ka hijroon waayay dhulkan, waxaan go’aansaday in aan si kale ugu gargaaro Muslimiinta,” ayuu ka hor sheegay xeer beegti kiiskiisa dhagaysanayso.
Mar la weydiiyay waxa dilka xildhibaanka ay xaaladda ka bedali karto, ayaa Cali waxa uu ku jawaabay “hadda ma uu coddeyn karoo o codkiisa kuma dhibi karo Muslimiinta, waana farriinta aan u dirayo saaxiibbadii.”
Eedeysanaha ayaa tilmaamay in arrinta kale ee uu u beegsaday xildhibaanka ay tahay xubinnimadiisa saaxiibbada Israa’iil ee xisbiga Conservative-ga.
Mar la weydiiyay inuu yahay Muslim xagjir ah, ayaa waxa uu ku jawaabay “waxaan ahay Muslim qunyar socod ah”.
Cali Xarbi ayaa maxkamadda u sheegay inuu rajeynayay in la dilo oo uu “noqdo shahiid” balse markii uu arkay in labada askari ee soo galay goobta uu xildhibaanka ku dilay aanay hubaysnayn, uu markaas go’aansaday inuu iska dhigo tooridda.
Maxkamadda ayaa horraan u dhegaysatay in eedaysane Cali uu qorsheynayay inuu beegsado wasiirka dowladaha hoose ee UK, Michael Gove.
“Waxaan rumaysanahay inuu [Michael Gove] dhibaato badan u geystay Muslimiinta,” ayuu Cali u sheegay xeer beegtida.
Waxa uu aad u doonayay inuu ku biiro ururka isku magacaabay dowladda Islaamka, oo uu rabay inuu Suuriya u safro mudadii u dhexaysay 2015 iyo 2017, balse ay taa ku adkaatay
Waxa uu garnaqsigiisa ku soo afjaray inuu filayo in dilka xildhibaan Sir David ay cashar u noqon doonto xildhibaannada kale, isla markaana “ay joojin doonaan colaadda ka dhanka ah Muslimiinta”.
Sir David, oo 69 jir ahaa, oo baarlamaankana ku matalayay deegaan baarlamaaneedka Southend West, ayaa kulan la lahaa dadka soo doortay, isagoo kala hadlayay waxyaabaha ay u baahan yihiin.
Ra’iisul Wasaare Boris Johnson ayaa xildhibaanka la dilay ku tilmaamay in uu ka mid ahaa dadka “ugu naxariista badan, ugu wanaagsan, uguna macquulsan dhinaca siyaasadda”
Previous articleWafdigii Qoor Qoor hogaaminaayey ee Xal doonka ahaa oo magaalada Baydhabo siweyn loogu soo dhaweeyey